Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2197 - 2198 | XperimentalHamid
funda Isahluko 2197 - 2198 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
UCynthia wayengasafuni ukuqhubeka nolu hlobo losuku olunzima.
Ukuba unyanzelekile ukuba ulinde de kufike uMnyhadala ka-Epreli ukubuyela umva, akukho kwahluka ngokumbulala.
UZhongquan akazange akwazi ukuzibamba kodwa wathuthuzela: “UCynthia, yamkele nje kwaye ubambe umsindo ulinde ezinye iintsuku ezimbalwa. Ukuba uCharlie akazimisele ukukukhulula, ndiza kumbiza. ”
UCynthia ngokwendalo wayenamawaka wezikhalazo entliziyweni yakhe, ke akazange abe nobuganga bokuthetha okungakumbi.
Wacinga ngokufihlakeleyo entliziyweni yakhe: “Ndiyayibona ngoku. Emehlweni katata wam, uCharlie ngoyena mntu ubalulekileyo kusapho lakwaWade. ”
"Emva kwayo yonke loo nto, ukuba uyatshata ngokwenene intombi kaPhilip, uyakuba yenye yeendlalifa zekhaya lakwa-Gu le-trillion-dollar, ezolunceda kakhulu usapho lakwa-Wade."
“Phantsi kwale meko, ndingazithelekisa njani nokubaluleka kukaCharlie kwintombi etshatileyo emehlweni katata?”
“Heyi, kubonakala ngathi ndingophula nje amazinyo ndiwaginye.”
Ke wayenokutsho ngomsindo: “Kulungile Tata, ndiyazi… Emva koko ndiza kulinda ngomonde ezinye iintsuku ezimbalwa. Ukuba uCharlie akandivumeli ukuba ndihambe kwiintsuku ezintathu okanye ezintlanu, kuyakufuneka umfownele nithethe… ”
Njengoko watshoyo, impumlo yakhe ibuhlungu, kwaye walila.
UZhongquan wathuthuzela: “Kulungile, ungakhathazeki, iintsuku ezintathu, ukuba uCharlie akakuvumeli uhambe emva kweentsuku ezintathu, uTata uza kumbiza ngokwakhe!”
UCynthia wanqwala, waminxeka wathi, “Tata, kulungile ke, ndiza kulinda…”
“Kulungile, usale kakuhle.”
Ukupheliswa komnxeba wevidiyo, iinyembezi emehlweni kaCynthia azibange zisakwazi ukuyeka, ukuzihlalela phantsi.
Ngalo mzuzu, ngequbuliso weva unkqonkqoza emnyango.
UCynthia waxhuma ebhedini, wabaleka waya emnyango ngamanyathelo ambalwa, watsala umnyango.
Ngaphambi kokuba ambone lo mntu ngaphandle, wathuka ngokunyamezelayo: “Wena [imeyile ikhuselwe], uzandikhupha nini? ”
UCharlie wajonga uCynthia enolusu oludidekileyo kunye neebhegi zamehlo ezidumbileyo, wafinga iintshiya wathi, “Makazi, imozulu eAurous Hill ifumile kwaye iyabanda. Ubuneentsuku ezilithoba ulapha. Umsindo awukacinywa okwangoku? ”
Xa uCynthia wabona ukuba yayinguCharlie, wakhawuleza wabuza ecaphukile: “Charlie! Ubusithi uyakundikhulula emva kweentsuku ezisixhenxe, kodwa amehlo am ebevalwe apha iintsuku zisithoba ngabantu bakho, bekutheni ungandivumeli ndihambe? ! ”
Emva kwayo yonke loo nto, wabona u-Orvel emi ecaleni kukaCharlie wakhalimela ngomsindo: “Yile nto [imeyile ikhuselwe]Undivalele iintsuku ezimbini ndedwa, ugwetyiwe! ”
UCharlie wathetha egodola wathi: "Ndifuna ukukugcina ezinye iintsuku ezimbini."
"Uyenzile lonto ?!"
UCynthia wabuza enomsindo: “Ngokucacileyo uthe iintsuku ezisi-7, kutheni uzijike zaziintsuku ezi-9? Ngoba?"
UCharlie wafutha wathi: “Nguwe, malumekazi wam? Kunzima ukuza apha, ungahamba njani ngeentsuku ezisi-7 kuphela? Nokuba ungathini, ungahlala ezinye iintsuku ezimbini. Ingaba oko kulungile?"
UCynthia wayesele eza kuqhuma ngesimo sikaCharlie sokugculela, kwaye ngomsindo wamkhalimela: “Charlie! Awufuni kuzenzela inkohliso nam! Andikakwazi? Mandikuxelele, kungcono ungayenzi into kunye nam, ndiyeke ndibuyele umva ngokukhawuleza! ”
UCharlie wanikina intloko kancinci, wancwina wathi: “Kubonakala ngathi ngeentsuku ezisithoba, awunakuwunqanda umsindo wakho. Isibhakabhaka sase-Eastcliff somile, kwaye umsindo wakho mkhulu kakhulu, ngokuqinisekileyo uya kuba mbi ngakumbi xa ubuyela umva. Ngokoluvo lwam, kuya kufuneka uqhubeke nokuhlala e-Aurous Hill kangangeentsuku ezimbalwa kwaye uvumele umsindo wakho ucime ngokupheleleyo ngaphambi kokuba uhambe! ”
Emva koko, kwangoko wathi ku-Orvel ecaleni kwakhe: "Orvel!"
Ngokukhawuleza uOrvel uthobe izandla: “Mnu. Wade, ithini imiyalelo yakho? ”
UCharlie wancuma wathi: “Udadobawo usafuna ukuhlala eAurous Hill iintsuku ezimbalwa. Ngeli xesha, ndiza kukukhathaza ukuze uqhubeke nokumbukela ngokungqongqo. Yonke into iyafana nakudala. ”
UOrvel ukhawulezile wabuza, “Mnu. Wade, uthe zingaphi iintsuku… zingaphi iintsuku? ”
UCharlie uye wacinga okwethutyana kwaye wahleka: “Ke, masihambe iintsuku ezi-7. Iya kuba yiveki yonke ukufumana ibhalansi. Ukuba ezi ntsuku zisixhenxe azisebenzi, kuyangqina ukuba umakazi unomsindo kakhulu, kuya kufuneka simnike ezinye iintsuku. Kuyinto entle kakhulu. ”
U-Orvel wancuma wathi, “Kulungile nkosi Wade, ndiyazi!”
Into awayeyicinga uCharlie ngeli xesha yile: “UCynthia, awuyontombi yomzali wam, musa ukuzenza ikumkanikazi apha. Awukaguquki. Ukuba unenkani, sukugxeka abo bangaphantsi kwam. Ndikhohlakele, oku kungasinyanga isimo sakho sengqondo, yile nto ndiyathemba! ”
Xa besiva amazwi kaCharlie, ubuso bukaCynthia batshintsha kwangoko!
Ithoni yakhe yathamba kwangoko, kwaye wacenga ekhala esithi: “Charlie! Awunakuba njengale! Ndikhe ndangcungcuthekiswa kwezi ntsuku zisithoba zidlulileyo kangangokuba andisabonakali ndingumntu. Ngaba uyabazi ubomi endibuphilileyo kwezi ntsuku zisithoba? Ukutyile ukutya abakundinika kona? Amanzi anamafutha acocekile, akukho ndawo yokucoca ubuso, akukho buso busebusweni, nkqu neezeliner… ”
“Imeko yam yolusu imbi kangangokuba ndiyafa. Kuya kuthatha ubuncinci inyanga ukuyifumana kwakhona. Ukuba uyandivalela ezinye iintsuku ezisixhenxe, ke nolusu lwam luya kugqitywa… ”
UCharlie walususa uncumo ebusweni bakhe wathi: “Malumekazi olungileyo, awukaqondi ukuba kutheni ndifuna ukuhlala eAurous Hill, hlala apha!”
“Ndikuvumele ukuba uhlale apha, ukuze ususe umsindo kwaye ufunde ukuba ngumfazi olungileyo. Ukuba uyakwazi, ndiya kukundulula uhambe; ukuba awukwazi ukuyenza, ndiza kukuvumela ukuba uhlale ude ube uyakwazi. Oko
“Nokuba ulusu lwakho lulungile okanye alulunganga, ludibana njani nam?”
UCynthia wayenomsindo kakhulu, kodwa ngaphezulu, wazicenga ngelizwi elibuhlungu: "Charlie, ndingumakazi wakho, siyintsapho, ungandiphatha kanjani ngoluhlobo…"
UCharlie wancuma wathi: “Owu, niqala ukundiphatha njengosapho ngoku? Kutheni ungakhange undiphathe njengosapho xa usuka e-Eastcliff uzokundixelela? Yintsapho? ”
UCynthia wayeneentloni kwaye ehleka: “Ndi… ndikwenzele wena…”
UCharlie wancuma wathi, "Uyenzele yonke into ngokundinceda!"
UCynthia wathetha phandle wathi: “Hayi kaloku! Ndingudadobawo wakho, ukuba andikufanelanga, kufanele ndenzele bani? ”
UCharlie waqhwaba izandla wathi ngoncumo: “Yinto eqondakalayo le, makazi, ndiyenza ngoku le nto ukuze kulunge kuwe! Akufanele uziyeke ezi njongo zam zintle! ”
Emva koko, wajonga uCynthia ngembonakalo.
Qhubeka nokuthi: "Ndikunika ukhetho-mbini!"
Ndathi, "Lokuqala, lihlala apha ezinye iintsuku ezisixhenxe."
"Kwezi ntsuku zisixhenxe, awuvunyelwanga ukuba ufunge, awuzukuphambana, awuvumelekanga ukuba ukhwaze ungxole apha!"
“Ukuba uthe waziphatha kakuhle, ngeentsuku ezisixhenxe, ndobathetha abantu bakowethu, ukuba ndinindulule.”
Emva kokumamela uCynthia wabuza, "uthini ngolu khetho lwesibini?"
UCharlie wathetha ngokungakhathali wathi: “Into yesibini kukuhlala apha enye inyanga! Kule nyanga, ukuba ufuna ukufunga, ungafunga, ukuba ufuna ukuphambana, ungaphambana, ukuba ufuna ukukhwaza, vele ukhwaze ngendlela ofuna ngayo. Khwaza, ndiza kube ndonwabile emva kwenyanga! ”
"Ukuba ndonwabile, ungaphindela emva."
“Kodwa ukuba andonwabanga, ndiyaxolisa, kungafuneka ndihlale nani okwethutyana kwaye ndenze konke okusemandleni am njengomnini-ndlu!”